मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुदैं, कानूनमन्त्री कार्कीलाई किन हटाउदैंछन् प्रधानमन्त्री देउवा ? – GALAXY
मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुदैं, कानूनमन्त्री कार्कीलाई किन हटाउदैंछन् प्रधानमन्त्री देउवा ?
काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालयको संख्याको भागबण्डा टुंग्याएका छन् ।
गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी ९एस० र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालबीच भदौ १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमतिसहित मन्त्रालयको संख्यामा भागबण्डा मिलेको छ ।
गठबन्धनका दलका एक नेताका अनुसार कांग्रेसले कूल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रूपमा १ राज्यमन्त्रीसहित ६–६ मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा क्रल २५ मन्त्री मात्र राख्न पाउने छन् ।
स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयको भागबण्डा मोटामोटी सकियो, सम्भवतः १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, कांग्रेसले कूल ७, माओवादी, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र जसपाले समान रुपमा १ राज्यमन्त्रीसहित ६र६ मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटेको छ, सम्भवतः त्यही दिन नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’
हाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित २ क्याबिनेट मन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ४ जना सरकारमा छन् । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा २ मन्त्री छन् । सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले ३ मन्त्रालय पाउने छ । योसहित कांग्रेसको भागमा ६ क्याबिनेट मन्त्री र १ राज्यमन्त्री रहनेछन् तर राज्यमन्त्रीको क्याबिनेट मन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना समेत बढेको जनाइएको छ ।
माओवादी केन्द्रले अब ३ क्याबिनेट मन्त्रीसहित १ राज्यमन्त्री गरी ४, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० ले १ राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि १ राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।
एमालेबाट औपचारिक रुपमा विभाजित भएपछि नेपाल पक्षलाई सरकारमा जान बाटो खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशअनुसार नेपालको दललाई बुधवार नै दर्ता गर्दै प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा क्याबिनेट मन्त्री बनाउने तयारी रहेको छ । कानून मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा हुनेछ । त्यसको जिम्मेवारी नेत्री पुष्पा भुसाललाई दिने तयारी रहेको छ ।
असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नै दल कांग्रेस र माओवादीबाट २र२ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई साउन १० गतेमा ल्याएका थिए । देशमा कोरोना महामारी कायम रहँदा पनि स्वास्थ्यमन्त्री नबनाएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि देउवाले श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा भित्र्याएका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।